राष्ट्रपति सीद्वारा पुटिनको प्रशंसा | Janakhabar
राष्ट्रपति सीद्वारा पुटिनको प्रशंसा
काठमाडौं, २३ जेठ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई निकटको मित्र भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति सीले पुटिनलाई ३० भन्दा बढी पटक भेटिसकेको भन्दै आफुहरुबीच आफ्नो गहिरो व्यक्तिगत मित्रता रहेको बताएका हुन् । अमेरिकासंग व्यापारिक युद्ध चर्किरहेका बेला चिनियाँ तीन दिने रुस भ्रमणमा छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले रुस र चीनको सम्बन्ध अभूतपूर्व तहमा पुगेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । दुई मुलुकको सम्बन्ध संसारभरिका लागि साझेदारी र रणनीतिक सहकार्य भएको उनको भनाइ छ । दुई नेताले भविष्यमा सैन्य र आर्थिक सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण चीन र रुसबीच व्यापारलगायका विषयमा केन्द्रीत रहेको बताइएको छ । दुई मुलुकबीच व्यापारिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ भने सीले मस्कोस्थित चिडियाखानालाई दुईवटा पान्डा उपहार दिएका छन् । युक्रेनको स्वायत्त क्षेत्र क्राइमिया आफुमा विलय गराएपछि पश्चिमाहरुसंग रुसको सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने पूर्वी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको छ । अमेरिकासंगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि चीन र रुस आर्थिक र सैन्य सहकार्यका लागि नजिकिएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । पछिल्लो साझेदारीका कारण उनीहरुको व्यापारमा पनि वृद्धि भएको छ । सन् २०१८ मा व्यापार २५ प्रतिशतले बढेर १०८ अर्ब डलर पुगेको थियो ।-एजेन्सी
लादेनका छाेरा मारिएकाे पुष्टि
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा नयाँ पार्टी- ..
प्रधनमन्त्रीले झुट बोले !
अदालत. कुखुराको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका- ..
बेलायतको बेरोजगार दर ४५ बर्ष यताकै निम्न- ..
अमेरिकाले शरणार्थी सहायतामा कटौती गर्ने
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सांसदहरुद्वारा- ..
‘कश्मिरलाई विश्वले वेवास्ता गर्न सक्दैन्’
अमेरिका र तालिबान विद्रोहीबीच ‘सहमति’
प्रदर्शनकारीमाथि खुर्सानीको धुलो प्रहार- ..
सुरक्षाकर्मीमाथि बम प्रहार, सांसदहरुसहित- ..